Author: Arakazahn Zujora
Muwaadiniinta Somaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dhedig, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman. Habaynta nidaamyada dhaqaale iyo kuwa lacageedba. Qof walba marka uu dhasho waxaa loogu duceeya. Deegaanka Xidda ee Degmada waaciye. Haddii ay Golayaashu diidaan codsiga xil-ka-tegidda ee ku sheegan faqradda 4aad ee qodobkan waxaa Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenku xaq u yeelanayaa in uu mar labaad keensado codsi dalab xil-ka-tegis ah muddo aan ka badnayn saddex bilood marki uu codsiga hore qortay; waxaana waajib ku ah labada GoIe in ay xil-ka-tegidda ka oggolaadaan.
Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda; r.
Waxaana si fiicam noogu soo dhamaaday wajigii labaad ee dhir beerista. Xasillooni lama helayo intaan xaalkaan ku wada jirno. Dangoroyo iyo maanta iyo soodhaweynta Madaxweyne asad osman loma kala harin Difaac iyo dowlad nimo shara and like. Dabeecada khalqigu kama sinmaan kalana door roone Daganaanta iyo fiiradiyo dabacsanaantiisa Qaarbaa darooriya warkoon dulucda beegayne Hadal aan dhaguhu diidinnoo beena laga dayray Aflagaado diidkiisa iyo sharaf u duubnaanta Doorkiyo abwaannada siduu diiradda u saaray Dumarkiyo caruurraha siduu ugu dadaalaayo Duqowdiyo siduu uga warqabo duubabkii dhaqanka Ilaaheey ha daayee walee waan ku diirsadaye Ninka doorran duubka u xidhoo Asad inoo doorra.
Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa. Qofka loo dooranayo xubinimada Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo da’da iyo heerka aqoonta oo noqonaya dusub hoos ku xusan: Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana leenahy intan iyo inkabadanba waaan gaari pentlnd inshallah Plz share By Yacmale.
Bulsho kasta iyaga aya hormariya deegaankooda, Wadooyinka Muqdisho qaarkood waxaa lagu kordhiyey in jidka dhexdiisa laga sameeyo taakooyin baabuurta hakisa. Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex sannadood gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland. Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah.
Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka pnetland nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana leenahy intan iyo inkabadanba waaan gaari doona inshallah Plz share By Yacmale.
Waxay ku dadaalaysaa in colaaddii raagtay oo dhex ooli jirtay dalalka Geeska Afrika lagu beddelo is af-garad iyo cusuh soo dhawaansho. Dawladdu waxay mudnaanta koowaad siinaysaa waxbarashada asaasiga ah; waxaanay u hawl galaysaa in gobollada iyo degmooyinka lagu baahiyo waxbarashada asaasiga ah. Ma bannaana kala diridda Golaha Wakulada sannadka u horeeya ee Golaha iyo sannadka u dambeeya ee muddada xilka Madaxweynaha.
Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon doonaa garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority. Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal AC ama telka Qofku wuxuu xaq penhland leeyahay in la nabad galiyo jidhkiisa; ciqaabta jidhka iyo wax yeelo kasta oo loo geysto way reebban tahay.
War deg deg ah madaxdooyadi somalia Oo ey caawa xabadi kabilaamatey iyo madax Tooyadii oo lasoowerarey sacaduna waa 2: Waana qori casri ah oo ay Ciidamada Turkiga u adeegsadaan howl-galada la xiriira la dagaalanka Argagixisada.
Dhawrsanaanta xubinta Golaha Guurtidu waxa ay la mid tahay ta xubinta Penltand Wakiilada iyadoo dhawrsanaan-ka-qaadista uu leeyahay Golaha Guurtidu. Waa taswiir dhabta ka hadlaya Walahii innaan nabad laheli doonin intii saqiraadu hu’ iyo hoos la’aan yihiin. Midnimada dalka Israacsanaanta dhul-ahaaneed.
CadaaladHorumar iyo Ictiraaf Ver mais. Haddii uu istiqaalad dhiibo ama uu geeriyoodo. Fadlan ka qayb qaado hergelinta mashruuca isku wax dastuirka qabso ee lagu dhisayo cusbitaalka degaaanka xidda.
Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Xukuumadda. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
Waxa reebban in laga jeediyo waxyaabaha ummadda kala kaxayn kara; dawladduna waxay ku leedahay ilaalin guud iyo kaalmayn wixi suurto-gal ah. Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana leenahy intan iyo inkabadanba waaan gaari doona inshallah. Waa in uu yahay muwaadin u dhashay Somaliland oo muwaadinimo dawlad kale haysan, balse wuu noqon karaa qoxooti dal kale deggan.
Hadaba, Said Dani gobolada Sanaag iyo Hayland uma ahayn Puntland shalay, ha ogaadaan marka Xildhibaanada sharaxta leh ee goboladaas in uusan istaahilin inay codkooda siiyaan.
Kala-xadaynta ku tilmaaman faqradda 1aad ee qodobkan, waa inay noqoto mid suurta-gelisa isku filnaansho gobollada iyo degmooyinku ka gaadhaan dhinacyada adeegyada bulsho.
Awoodda Garsoorka u Gaarka ah. Qof kasta waxa waajib ka saaran yahay daryeelka, ilaalinta iyo badbaadada deegaanka.